ဆီးဂိမ်း ၊ နော်အုန်းလှ ၊ စိုင်းနော်ခမ်း နဲ.တရုတ်ကျေးဇူး
ပို့စ်တင်ချိန် - 12/19/2013 09:45:00 PM
ထူးကြီး - ၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ.တောင်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲဖွင်.ပွဲအခမ်းအနားကို ကြည်.လိုက်ရလားဟ ။ တကယ်ခမ်းနားတာနော် ။ထင်တောင်မထင်ရဘူး ။
မူးကြီး- ဟုတ်ပါတယ် ။ဒီအခမ်းအနားကို စင်္ကပူနိုင်ငံကနေ ကြည်.နေတဲ.မြန်မာပရိသတ်ဟာ ၀မ်းသာလွမ်းလို.မျက်ရည်တောင်လည်တယ်ဆိုပဲ ။ ကမ္ဘာမှာအမြဲတမ်း ဘိတ်ချေးဘ၀နဲ. မျက်နှာငယ်ခဲ.ရတဲ.မြန်မာဟာ ဒီတစ်ကြိမ်တော. မြန်မာ. ယဉ်ကျေးမှုဟာ ဘာ လဲဆိုတာ ရယ် ။ ကမ္ဘာ. အဆင်. တင်ဆက်ပြသမှု ကို ဒို.တတွေလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာရယ် ကမ္ဘာကို ပြခွင်.ရတဲ.ပွဲပါပဲ ။
ထူးကြီး- ဒါကတရုတ် လက်ရာတွေဆို
မူးကြီး- အေးကွ ။ တရုတ်ကနည်းပညာအကူအညီပေးခဲ.တာတော.အမှန်ပဲ ။ ဥပမာ စတိတ်ခုံအပြင်အဆင် ၊ မီးပေးတဲ.စနစ် ၊ မီးရှူးမီးပန်းတွေရောပေါ. ။ ဒါပေမယ်. ငါတို.မြန်မာ အနုပညာရှင်တွေရဲ. ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း မရှိပဲ မဟာပုဂံ တို.လို ၊ စောင်းတော်သိင်္ဂါတို.လို ၊ ပွဲဦးအလင်္ကာ တို.လိုပြကွက်တွေဟာ နဂိုရှိမှ နဂိုင်းထွက်တာပါငါ.လူ ။ တရုတ်ကဘယ်လောက်ပဲ နည်းပညာပံ.ပိုးပံ.ပိုး မြန်မာဘက်ကပြစရာမရှိပဲ ချိုမိုင်မိုင် ကမတက်ရင် ဒီလောက်ခမ်းနားစရာမရှိဘူးဟ ထူးကြီးရ ။ ကိုယ်ပိုင်အရည်အချင်း ၊ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှုကအဓိကပဲ ။
ထူး- ဒါဆိုခင်ဗျားက တရုတ်ကျေးဇူး မရှိဘူးလို. ကျေးဇူးကန်းတာပေါ.ဟုတ်လား ။
မူး- S.E.A Games မှာ ကူညီတာတော.ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဒါပေမယ်. ဒို.တွေ သူတို.ကိုကျေးဇူးဆပ်ခဲ.တာလဲများနေ့ပီလေ ။ ကျေးဇူးပြုတာကနဲနဲ ဆပ်လို.မကုန်အောင် သစ်တောတွေ ၊ တွင်းထွက်ကျောက်သံ ပတ္တမြားတွေ ၊ သဘာဝဓါတ်ငွေ.တွေ ၊ မြေယာတွေ ၊ ပိုက်လိုင်းတွေ ၊ရေနံလုပ်ကွက်တွေ ထိုးကျွေးပေးပြီးပြီလေ ။ ဒီကြားထဲ မြန်မာ မိန်းကလေးအချို.တောင် လူမှောင်ခိုဘ၀နဲ. အဆစ်ပါသွားသေးတယ် ။ ဒီထက်ပိုပြီး ကျေးဇူးဆပ်ရရင်တော. မြန်မာတစ်ပြည်လုံးတရုတ်ကို Export လုပ်လိုက်ဖို.ပဲရှိတော.တယ် ။
ထူး- ခင်ဗျားပြောတဲ.စကားတွေ ဟာ ကျုပ်တို.နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲတွေ နဲ.တော.ဆန်.ကျင်ဘက်ပဲ ။ သူတို.ကတရုတ်ကျေးဇူးဟာ တစ်သက်လုံးဆပ်လို.မကုန် တော.သလိုလို ပြောနေကြတာပဲ ။ ဟိုတလောကတောင် တရုတ်အလံကိုမီးရှို. ဆန္ဒပြရာမှာ အားပေး ကူညီမှုနဲ. ဒေါ်နော်အုန်းလှကို ၆.၁၂.၂၀၁၃ ည က ရဲတွေလာဖမ်းသွားပါပကော ။
မူး- ငါကြားပါတယ် ။ နိုဝင်ဘာ (၂၉) ရက်နေ.က လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းကိုကန်.ကွက်တဲ.အနေနဲ. ကိုတင်ထွဋ်ပိုင် ခေါင်းဆောင်တဲ.တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေက တရုတ်နိုင်ငံအလံကို မီးရှို.ဖျက်ဆီးခဲ.တာလေ ။ အဲသဟာကြောင်. တရုတ်အစိုးရ (အဲလေ) မြန်မာအစိုးရမင်းများကဆတ်ဆတ်ခါ နာပြီး ကိုတင်ထွဋ်ပိုင်ကို ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကိုထိခိုက်စေမှုနဲ. အာမခံမပေးပဲ ဖမ်းပြီး အင်းစိန်ထောင် ကိုပို.လိုက်သဟ ။ ဒေါ်နော်အုန်းလှကိုတော.တရုတ်အလံ မီးရှို.ချိန်မှာ အနားမှာရှိနေတာကြောင်. အားပေးကူညီမှုနဲ. လာဖမ်းသွားတယ်ကွ ။
ထူး- တရုတ်အတွက်ဆို (အဲလေ ) ပြည်သူ.အတွက်ဆို အတော်ကိုတာဝန်ကြေတဲ.ရဲတွေပါ ပဲဗျာ ။ တကယ်ချီးကျူးဖို.ကောင်းပါတယ် ။ ဒါနဲ. မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးရှေ.မှာ ဘင်္ဂလီတွေက မြန်မာအလံကိုမီးရှို. ဆန္ဒပြတော. မြန်မာ ပြည်က မျိုးချစ်အစိုးရဟာအခုလိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန်.ကွက်မှာပဲနော် ။
မူး- မကန်.ကွက်ဘူးကွ ။အဲဒိတုန်းက နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအပါအ၀င် အစိုးရတစ်ဖွဲ.လုံး အဓိဌာန်ဝင်နေကြတယ်ကွ ။မအားကြဘူး
ထူး- ငါမသိလိုက်ပါလား ။ဘာအဓိဌာန်ပါလိမ်.
မူး- သူတို.ကအဲဒိတုန်းက ပါရမီဆယ်ပါးကျင်.စဉ်ထဲက “ ခန္တီ ပါရမီ “ ကို ဖြည်.ဆီးဖို. အစိုးရတစ်ဖွဲ.လုံးရော ၊မြန်မာသံရုံးပါ အဓိဌာန်ကြီးဝင်နေတယ်ကွ ။ ဒါ.ကြောင်. ဘုရားလောင်း ဘူရိဒတ်နဂါးမင်း ကိုအတုယူပြီး ဘာပဲ လုပ်လုပ် လက်တုန်.မပြန်ပဲ ပါရမီဖြည်.နေတာ ။ သာဓုခေါ်စရာအင်မတန်ကောင်းတယ်မောင် ။
ထူး- အော်ဒီလိုလား ။ ဒါဆိုအခု နော်အုန်းလှနဲ. ၊ တင်ထွဋ်ပိုင် တို.ကိုဖမ်းတာကျတော. ခန္တီပါရမီ က ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲ
မူး- မင်း ဗုဒ္စဘာသာမြန်မာလူမျိုးမဟုတ်ဘူးလား ။ အဓိဌာန်ဆိုတာ သူ.အချိန်ကာလနဲ.သူရှိတယ်ကွ ။ ဥပမာ ခုနစ်ရက်အဓိဌာန် ၊တစ်လ အဓိဌာန် ဒီလိုရှိတယ် ။အခုနော်အုန်းလှတို.ကိစ္စကျ အဓိဌာန်ကပြည်.သွားပြီ ။ ဒီနေရာမှာကျ ပြည်.ရှင်မင်းတို.သည် မီးကဲ.သို.ကျင်.ကြံရာ၏ ဆိုတဲ. ရှေး မဟာသမ္မတမင်းတို.ရဲ. လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်း လုပ်ရတယ် ကွ ။
ထူး- အင်း ဒါဆို မင်းအဓိဌာန် က ကွက်ကျားမိုးအဓိဌာန်ကြီးပါလားဟ ။ ထူးဆန်းပါပေ.ဆရာတွတ်ရေ လို. တွတ်ပီ တပည်. ဗိုက်ကလေးညီးသလိုသာ ညီးလိုက်ချင်ပါရဲ.ကွာ ။ ဒါနဲ.ငါမသိလို.မေးဦးမယ် ။ အလံတော်ကိုမီးရှို.ဖျက်ဆီးတာ ဥပဒေအရအရေးယူလို.ရလား ။ ဟိုတလောက ပါတီကြီးတစ်ခုရဲ. ညီလာခံမှာ နိုင်ငံတော်အလံကိုဇောက်ထိုး ပြောင်းပြန် ချိတ်ထားတယ်ဆို ။ ပြီးတော. ပြည်သူ.လွှတ်တော်မှာလဲ လွှတ်တော်ဥက္ကဌ က နိုင်ငံခြား ဧည်.သည်နဲ.တွေ.တဲ.ပွဲမှာ အလံဇောက်ထိုးဖြစ်နေဆိုပဲဟ ။ အဲဒါတွေကော အရေးယူတယ်မကြားလိုက်ပါဘူး ။
မူး- ထူးကြီး မင်းဟာ အ၇ိပ်အကဲ ခုထိနားမလည်ပါလား ။ တစ်ထွာပြရင်တစ်တောင်မြင်လိုက်စမ်းပါ ။ ငါပြောပြီးပါပကော အဲဒိတုန်းက အစိုးရဟာ ဘာသာရေးဘက်မှာ အရမ်း ကိုင်းရှိုင်းပြီး အဓိဌာန်ဝင်နေပါတယ်လို. ။အဓိဌာန်ကာလဆိုတော. သည်းခံတယ်မောင် ။အခုတော.အဓိဌာန်ပြည်.သွားပြီ ။
ထူး- ငါက ဥပဒေတွေဘာတွေနားမလည်လို.ပါ မူးကြီးရာ ။ မင်းက တရားရုံး အနားမှာ ဂျာနယ်ရောင်းသလိုလိုနဲ. နှစ်လုံးဒိုင်ဖွင်.ဖူးတာမို. ဥပဒေကို ပိုသိမှာပါ ။အလံကိုမီးရှို.မှုကတကယ်ကြီးသလားမောင် ။
မူး- အင်း ၊ ငါ ရှေ.နေနဲ.တရားသူကြီးတွေကို နှစ်လုံး သုံးလုံးသွားရောင်းရင်းစကားစပ်ကြည်.ရသလောက်ကတော. မြန်မာနိုင်ငံရဲ. တည်ဆဲဥပဒေတွေမှာ ကိုယ်.မြန်မာနိုင်ငံတော်အလံ ကိုဖျက်ဆီးရင်တော. အရေးယူခံရမယ်လို.ပြဌာန်းထားတယ် ။ဒါပေမယ်. တရုတ်အလံ ၊ ကုလားအလံ ၊အင်္ဂလိပ်အလံ စသည်ဖြင်. နိုင်ငံခြားအလံတွေနဲ.ပါတ်သက်လို.ဥပဒေသီးသန်.တော.မရှိဘူးဟ ။
ထူး- ဒါဆိုတရုတ်အလံကိုမီးရှို.တာဥပဒေကိုမဆန်.ကျင်ဘူးပေါ. ။
မူး- တရုတ်အလံဖျက်ဆီးမှုအတွက်တော. ဥပဒေသပ်သပ်မရှိဘူး ။ဒါပေမယ်. အရေးယူချင်ရင်ကြံဖန်ပြီး ယူလို.ရတဲ. ပုဒ်မ ၁၃၀(ခ) ဆိုတာရှိတယ် ။သူက အခြားနိုင်ငံများကိုအသရေပျက်စေမှုတဲ.ဟ
ထူး- ကိုယ်.နိုင်ငံအသရေပျက်တာကျ ငြိမ်နေကြတာပဲမို.လား ။ ကဲပါ လုပ်စမ်းပါဦး အခြားနိုင်ငံအသရေပျက်စေမှုဆိုတာ နော်အုန်လှတို. တင်ထွဋ်ပိုင်တို.နဲ.ဆိုင်လို.လားဟ ။ ပြောပြစမ်းပါဦး ။
မူး- အင်း ဒီလိုကွ သူပြောထားတာက နှုတ်ဖြင်.ဖြစ်စေ ၊စာဖြင်.ဖြစ်စေ ၊အမှတ်အသားဖြင်.ဖြစ်စေ ၊ ထင်ရှားသောပုံသဏ္ဍန်ဖြင်.ဖြစ်စေ မည်သူမဆို ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံနှင်. နိုင်ငံခြားတို.၏ ငြိမ်းချမ်းစွာ မိတ်ဆွေအဖြစ် ဆက်ဆံမှုကိုနှောက်ယှက်ရန် အကြံဖြင်. နိုင်ငံခြားကိုဖြစ်စေ ၊ နိုင်ငံခြား၏အထွတ်အထိပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြစ်စေ ၊ နိုင်ငံခြားသံအမတ်ကိုဖြစ်စေ ၊နိုင်ငံခြား၏အခြားထိပ်တန်းပုဂ္ဂိုလ်များကိုဖြစ်စေ ဂုဏ်နိမ်.ကျစေတတ်သည်. ၊သို.တည်းမဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးစေတတ်သည်. ၊သို.တည်းမဟုတ် မုန်းထားအောင်သော်၎င်း ၊ မလေးစားအောင်သော်၎င်း ဖြစ်စေတတ်သည်.အရာကိုကြေညာလျင် ၊ ထိုသူကိုသုံးနှစ်အထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည် လို.ပါတယ်ကွ ။ ဒီတော.အဲဒိ ပုဒ်ထီးပုဒ်မတွေနဲ.ကြံဖန်အရေးယူလို.ရတယ် ။
ထူး- နိုင်ငံခြားကို အမိအရကာကွယ်ပေးထားတာပဲနော် ။ ဒါနဲ.စကားမစပ် အဲဒိ ဥပဒေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ကို ဂုဏ်နိမ်.ကျစေတတ်သည်. ၊သို.တည်းမဟုတ် ဂုဏ်သိက္ခာထိပါးစေတတ်သည်. ၊သို.တည်းမဟုတ် မုန်းထားအောင်သော်၎င်း ၊ မလေးစားအောင်သော်၎င်း ဖြစ်စေတတ်သည်.အရာကိုကြေညာလျင် ၊ ထိုသူကိုသုံးနှစ်အထိထောင်ဒဏ်တစ်မျိုးမျိုးဖြစ်စေ ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ၊ ဒဏ်နှစ်ရပ်လုံးဖြစ်စေ ချမှတ်ရမည် လို.ရောမပါဘူးလား မူးကြီးရာ ။
မူး- မပါဘူးကွ ဥပဒေနာမည်ကိုက အခြားနိုင်ငံများကိုအသရေဖျက်မှုကွ ။ ကိုယ်.နိုင်ငံ အသရေဖျက်ခံရမှုကသပ်သပ်ကွ ။ ဒီမှာမပါဘူး ။
ထူး- ငါကအကောင်းမေးတာပါကွာ ။ ဘာဖြစ်လို.လဲဆိုတော. ငါတို.နိုင်ငံသား ရှမ်းလူမျိုး စိုင်းနော်ခမ်းကို တရုတ်သင်္ဘောသားတွေသတ်မှု ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုတွေနဲ. မြန်မာနိုင်ငံကဖမ်းပြီး တရုတ်နိုင်ငံကိုအပ်တယ် ကွာ ။ အဲဒိမှာတရုတ်အာဏာပိုင်တွေက သေဒဏ်စီရင်တယ် ။ သူကျူးလွန်တဲ.အမှုအတွက်သေဒဏ်ပေးခံရတာကို ငါတော. ဘာမှမပြောလိုပါဘူးကွာ ။ဒါပေမယ်. မကွက်မျက်ခင် တရုတ်အရာရှိတွေရှေ.မှာစိုင်းနော်ခမ်း ကိုဒူးတုတ်ပြီး ထိုင်ခိုင်းတယ်ကွာ ။လက်ထိတ်လဲခတ်ထားတယ် ။ကြိုးနဲ.လဲချည်ထားသေးတယ်။ လူတစ်ယောက်လုံး အသက်ကိုသွေးအေးအေးနဲ.ကွက်မျက်တဲ.ကိစ္စကို တရုတ်ရုပ်မြင်သံကြားကနေ Live ထုတ်လွှင်.ပြသတယ် ကွာ ။ဒါဟာဘယ်လောက်လူမဆန်တဲ.ကိစ္စလဲ ။ ငါတို.နိုင်ငံကရော ကိုယ်.နိုင်ငံသား တစ်ယောက် သူများနိုင်ငံမှာ သေရတော.မယ်ကိစ္စကို ငါနဲ.မဆိုင်ဘူးဆိုပြီး အလိုတူအလိုပါရေငုံနှုတ်ပိတ်နေတော.တာပဲလား ။သံတမန်နည်းအရ ဘာမှဝင်ပြီးအထောက်အကူမပေးတော.ဘူးလား ။ကိုယ်.နိုင်ငံသားတစ်ယောက် ခွေးသေသေတာကိုဒီအတိုင်းကြည်.နေရက်သလား ။အနည်းဆုံး စိတ်ဓါတ်ရေးရာအရ ၊သံတမန်ရေးရာအရ မားမားမတ်မတ် ရပ်သင်.တာပေါ . ။ တကယ်လို. မြန်မာနိုင်ငံမှာပြစ်မှုကျူးလွန်လို. တရုတ်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ကိုသေဒဏ်စီရင်မယ် ဆိုပါတော. ။ မြန်မာအစိုးရ ငြိမ်နေသလို တရုတ်အစိုးရက ကိုယ်နဲ.မဆိုင်သလိုနေနေမယ် ထင်သလား ။ ပြီးတော.အခု ကွက်မျက်ခံရတဲ.စိုင်းနော်ခမ်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုရင် တရုတ်က ဒီလိုလုပ်ရဲပါ.မလား ။ အမေရိကန်ကရော မြန်မာလို မျက်နှာလွဲခဲပစ်လုပ်မလား ။တကယ်တော. ဘာပြစ်မှုကြီးပဲကျူးလွန်သည်ဖြစ်စေ ၊ သူဟာ လူသားတစ်ယောက် ။ မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက် မို. နိုင်ငံတော်ရဲ. ထိရောက်တဲ. ကာကွယ်မှုကိုရသင်.ပါတယ် ကွာ ။
မူး- ဒါတော. တရုတ်စားဖူး သူ.ကျေးဇူး ( အဲယောင်လို. ) တစ်လုပ်စားဖူးသူ.ကျေးဇူးဟ ။ အရင်ခေတ်က ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေခမျာ “ ဂန္စာလရာဇ် ဂုဏောအနန္တော “ ဖြစ်နေဟန်တူတယ်ဟ ။ တရုတ်ကျေးဇူးတပည်.တော်တို.မှာ ရှိတယ်ဘုရား ၊ တရုတ်ကိုတပည်.တော်တို.ကကြောက်နေရတယ်လို. ဟိုဝန်ကြီးတစ်ပါးပြောခဲ.တာလဲတိုင်းသိပြည်သိမဟုတ်လား ။ ပြီးတော. နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသံတမန် ရာထူးတွေမှာ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာနဲ.ဘွဲ.ရခဲ.တဲ.သူတွေထက် နီးစပ်ရာ မိုးကျရွှေကိုယ်တွေကိုခန်.ထားမှတော. သံရေးတမန်ရေးထက် ကိုယ်.အတွက်ကျန်ရေးကို ဒို.တာဝန် အရေးတစ်ပါးလို.သတ်မှတ်ကြမှာပေါ.ဟ။ စိုင်းနော်ခမ်းသေတာပဲ ၊ သူတို.အမျိုးသေတာမှမဟုတ်ပဲ ။
ထူး- အေးဟေ. ဆီးဂိမ်း ဖွင်.ပွဲတော.ပြီးသွားပြီ ။ ၂၂ ရက်နေ.ကျရင်ပိတ်ပွဲလာဦးမယ် ။ တရုတ်ကကူညီလို. ခမ်းခမ်းနားနားဖြစ်တာတော.၀မ်းသာပါတယ် ။ဒါပေမယ်. ဖွင်.ပွဲပိတ်ပွဲမှာ ကူညီခဲ.လို. ကျေးဇူးဆပ်တဲ.အနေနဲ. နယ်စပ်ကသစ်တွေ တရုတ်က သိမ်းသွားမှာတော. ကြောက်စရာပဲဟေ.။
မူး- ဒါတော.မပူပါနဲ. ၊ လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော.ပါဘူး ထူးကြီးရာ ။
ထူး- ဒို.အစိုးရ သတ္တိတွေ ရှိပြီး ရဲရဲတောက်ဖြစ်လာပြီပေါ. ။
မူး- မဟုတ်ပါဘူး ၊ ခုတ်စရာသစ်တောတွေမရှိတော.လို.ပါ ။အားလုံးကုန်ပြီလေ ။သဘာဝအရင်းအမြစ်ပေါတဲ.နိုင်ငံမို. သစ်ပင်အရင်းနဲ. အမြစ်တွေပဲကျန်တော.တယ် ။
သရ၀ဏ်(ပြည်) News Watch ဂျာနယ် ၂၄.၁၂.၂၀၁၃